Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka oo ku Baaqay in la iska Kaashado hagaaajinta deegaanka. – Radio Daljir
Juunyo 5, 2019 1:02 g 0
“Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan diro qaylo-dhaan deegaan taas oo ku qotonta sida deegaankeennu usii baaba’ayo lana joogo waqtigii qofkasta uu isuxil-qaami lahaa sidii deegaankeennu u noqon lahaa mid saamaxaya nolosha jiilka haatan iyo kuwa dhalan doona”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalku.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in Dikhowga Hawada uu si guud sannadkii u galaafto nolosha dad kabadan 7 malyuun oo ruux kuwaas oo eersada ku noolaanshaha deegaan wasakheysan, Neefsashada hawada wasakheysanna ay ka mid ah dikhwoga sababi kara khatarta caafimaad, dhibaato dhaqaale iyo bedqabka bulshooyin caalamka.
Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa sheegay Jarista dhirta iyo gubista dhuxushu ay qayb ka yihiin kororka dikhowga hawada ee dalka iyada oo sidoo kalena maareyn xumada qashinka iyo qiiqa gawaarida dalka oo badankoodu gaboow yihiin ay qayb weyn ka yihiin wasakhowga hawada taas oo ka dhigaysa waddaankeena mid halis ay kujirto caafimaadkiisa iyo bedqabkiisa.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa caddeeyay in Soomaaliaya ay diyaar u tahay inay qayb ka ahaato dedaalada caalamiga ah ee lagu xakamaynayo wasakheynta hawada, oo ay abuurayso dedaal taariikhi ah oo ku aaddan bedqabka deegaanka Soomaaliya kaasoo ay qayb ka tahay; maalgashiga tamarta, maareynta qashinka, xakamaynta dhir jarista iyo hubinta tayada iyo bedqabka dhammaan qaybaha deegaanka.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa muhiimad gaar ah siinaysan wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka ragaadiyey oo ay ka mid yihiin; isbedelka cimilada, xaalufka iyo nabaad guurka, dabar go’a duurjoogta, xaalufinta dhirta, qashinka, xaalufka kheyraadka badaha & berriga ba.
Tan iyo sannadkii 1974, 5ta Bisha Juun ayaa dunida waxaa laga xusaa Maalinta Deegaanka Adduunka taas oo looga golleeyahay inay qayb ka ahaato wacyigelinta arrimaha deegaanka isla markaana ay bulashooyinka caalamku ku dedaalaan sidii ay diiradda u saari lahaayeen dhibaatooyinka waaweyn ee ragaadiyey deegaanka. Sannadkan 2019, waxaa uu caalamku isla qaatay in “Dikhowga Hawada” uu noqdo dhibaatada deegaan ee diiradda lagu saari doono xuska maalintan.